ဘာသာစကားကို VKONTAKTE ပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို - VKONTAKTE - 2019
dynamic nxcooking.dll စာကြည့်တိုက်အစိတ်အပိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဗဟုအတွက်ရူပဗေဒအင်ဂျင်လေ့လာမှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသော PhysX နည်းပညာ, ကိုယ်စားပြုတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိဖိုင်နှင့်အတူပြဿနာများမလျော်ကန်သောယာဉ်မောင်း၏ installation သို့မဟုတ်ဂိမ်းသူ့ဟာသူအဖြစ်စာကြည့်တိုက်မှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌ပေါ်လာပါသည်။ ပျက်ကွက် Vista ကထဲကနေ Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်းပေါ်တွင်ထင်ရှားနေသည်။
ကြောင့်ထိုပြဿနာများ၏သရုပ်၏သဘောသဘာဝရန်၎င်း၏ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်အများအပြားနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် NVIDIA ယာဉ်မောင်း, တတိယအဘို့ - - စာကြည့်တိုက်၏လက်စွဲတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်စနစ်တွင်ဤ၏ပထမဦးဆုံး, လုံးဝဒုတိယဂိမ်းအပြည့်အဝပြန်လည် install ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အနိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
Method ကို 1: အဆိုပါအသားတင်ဂိမ်းပြန်လည် install ပြုလုပ်
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်း PhysX အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုကွန်ပျူတာဂိမ်း၏မမှန်ကန်ကြောင်းတပ်ဆင်ခတည်ရှိသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, သင်သန့်ရှင်းတဲ့ registry ကိုမှဆော့ဖ်ဝဲ၏ပြန်လည် install ပြုလုပ်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
ဖြုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဂိမ်း software များလုပ်ဆောင်။ ဥပမာအားဖြင့်, Revo Uninstaller - သာ. ကြီးမြတ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ကျွန်တော်အထူးပြု applications များ အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။
သင်ခန်းစာကို: Revo Uninstaller အသုံးပြုခြင်း
ဂိမ်းကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် Registry ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်။ ဤသည်စစ်ဆင်ရေးငါတို့သည်လည်း Third-party ကနေဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့အကြံပြု - တာဝန်နှင့်အတူဿုံ CCleaner ကို၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။
load ဖြန့်ဖြူးဆက်ဆက်တစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောဂိမ်း application ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် install လုပ်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Installer ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုအောက်ပါ။ Microsoft က packages များ Visual C ++, .NET Framework ကိုနှင့် DirectX ကို - ဒါဟာသင်တို့ကိုလည်း install အပေါင်းတို့နှင့်အပိုဆောင်း software ကိုကြောင်းအကြံပြုသည်။
Method ကို 2: (သာ NVIDIA) ကဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုယာဉ်မောင်းကိုပြန် install လုပ်
အင်ဂျင်၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လိုအပ်သောအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများ, ဒီထုတ်လုပ်သူများ၏ GPU ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြန့်ဝေနိုင်အောင် PhysX နည်းပညာရှည်လျားခြင်း, NVIDIA ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အိုပင်ထိုကဲ့သို့သောကြီးတွေ-name ကိုရောင်းချသူမကြာခဏအပြည့်အဝစမ်းသပ်ပြီးမဟုတ် software ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကိုယ်တိုင်ကခွင့်ပြု, အဘယ်ကြောင့် software ကိုချို့ယွင်းချက်သတင်းပို့ကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်ကရရှိနိုင်ပါသည်ထက်ပိုမကြာသေးမီဗားရှင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ယာဉ်မောင်း reinstall ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အသေးစိတ်ကိုလမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုသင့်လျော်သောအပိုင်းကိုကိုးကားပါ။
သင်ခန်းစာကို: ဂရပ်ဖစ်ကားမောင်းသူကို reset နည်း
အကယ်. သို့သော်ကားမောင်းသူကိုအသုံးပြု Nvidia GeForce အတွေ့အကြုံအစီအစဉ်၏ခြယ်လှယ်အဘို့, ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ဖို့အတွက်ကို manual ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ။ ပြဿနာများ၏အမှု၌, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများကသူတို့ဖျက်သိမ်းရေးအပေါ်အသေးစိတ်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ကြပြီ။
အဆိုပါ Nvidia GeForce အတွေ့အကြုံသုံးပြီးယာဉ်မောင်း Installing
NVIDIA drivers တွေကို install လုပ်သည့်အခါအမှားခွဲခြားစိတ်ဖြာမှု
Method ကို 3: လက်စွဲစာအုပ်အစားထိုးစာကြည့်တိုက်
ရံဖန်ရံခါဖိုင်ကို nxcooking.dll နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခု PhysX နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မထားတဲ့ Intel ကသို့မဟုတ် AMD ၏မှဗီဒီယိုကတ်များနှင့်အတူစက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အပြည့်အဝ elucidated ရသေးပေမယ့်အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်၏နည်းလမ်းလူသိများသည် - ကိုယ်တိုင် directory ကိုမှပျောက်ဆုံး DLL ကိုပစ်ရန် ကို C: / Windows / System32 သို့မဟုတ် ကို C: / Windows / SysWOW64ဒါက operating system ကိုဗိသုကာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဖတ် - သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက်များ, ရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက။ ဒါ့အပြင်တိုက်ရိုက်ဖိုင်ကို manipulate အပြင်, ကလည်း Registry ကို system ထဲမှာ DLL ကို register ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Windows အမှုစနစ်အတွက် DLL ကို install လုပ်နည်း
ဤအကြံပြုချက်များကိုသင် nxcooking.dll ပြောင်းလဲနေသောစာကြည့်တိုက်အတွက်ပြဿနာများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးပါမည်။